Author: Daibar Doumuro
Hase yeshee, habkan ma aha hab federaal ah, oo waxaa weli inta badan go’aanka yeelanaya dowladda dhexe es uu hoggaaminayo madaxweynaha, xubanaha loo magacaabayo golaha wasiiradana, waxay ka imaan doonaan baarlamanka dibadiisa.
Islaamku waa Diinta Dowladda. Dhinaca kale, iyadoo doodaas ay ka bilaabatay gudaha Soomaaliya ayaan baaritaan ku sameynay haddii uu jiro dunidan dal ogolaanaya in uu madaxweyne ka noqdo ruux labo dhalasho isku csub, natiijada waxaa ay noqotay in caalamka laga diiday ruux labo baasaboor leh in uu dal hogaamiyo.
Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha inta dacwaddiisu ka dhammaaanayso. Cutubka 8aad Baarlamaanka Federaalka. Guddoon afri Qarameed oo keliya ayaa lagu oggolaan karaa waxkabeddelidda dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Shacbiga Soomaaliya waa hal, lamana kala qaybin karo. Qodobka in laga fiirsado u baahan waa 88aad ee shuruudda doorashada madaxweynaha, laakiin inta aan qodobkaas ka hadlin, u fiirso dastuurka qodobkiisa 8aad faqradiisa 3aad oo u qoran: Dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa laguma xad-gudbaan lamana qaybin karo.
Cutubka 3aad Xuquuqda Aas-aasiga ah. Waxaana soo shaacbaxay beryahan in xataa laga qariyay Dastuurkaan gudigii madaxa banaanaa oo hada sheegay in dastuurka lasoo bandhigay uu ka duwan yahay midkii markii hore ay gacanta ku hayeen. Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa.
Image caption Dadka taageersan dastuurka cusub Berito oo arbaca ah, taariikhduna tahay afarta bisha Agoosto, Dalka Kenya waxaa looga dareeri doono afti loo qaadayo dastuur cusub, oo ay ku kala qeybsameen siyaasiyiinta iyo hoggaamiyaasha madhabta masiixiga ee diinta masiixiga.
Qodobka aad-Awooda Madaxweynaha Awoodaha madaxweynaha waa: Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah. In la badalo dastuurka, waxay qeyb ka mid ahayd heshiis ay beesha caalamka taageertay, oo lagu soo afjaray rabshado uu dhiig badan ku daatay, oo ka dhashay doorasho natiijadeeda la isku khilaafay laba sanno ka hor. Dastuurka qabyo-qoraalka oo maanta horyaala odayaasha Muqdisho lagu aruuriyay waxaa qortay gabar u dhalatay wadanka Jamayka oo magaceeda lagu sheegay Abril.
Qodobka aad-Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha. Qodob kale oo Warar ah. Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda.
Man to watch in December 27, Qodobka aad-Bannaanaanta Xaafiiska Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa. Ammaanka ayaa aad loo adkeeyeycabsi laga qabo in si la mid ah dii ay rabshado ka dhacaan dalka. Diinta ay aaminsan tahay haweenaydaas. Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska 2 Madaxweynuhu marka uu dhisayo Golaha Wasiirrada waa in uu tixgeliyaa qaybaha ay ka kooban tahay bulshada Soomaaliyeed.
Somalia edges closer to famine as millions struggle without food December 28, Haddii la qaato nidaamka madaxweynennimada nambarada qodobbada hoose dastuurkka is badalayaan.
Waxaa sidoo kale laga taxadaray qaabka loo xalinayo khilafaadka ka dhasha doorashooyinka, waxaana uu ku tallinayaa dastuurka cusub in la sameeyo maxkamad gaar ah, oo xalisa khilaafaadka doorashooyinka, iyadoo aanan xil loo dhaarin doonin madaxweyne inta laga xalinayo khilaafka.
Qodobka aad-Habka Iscasilaadda Madaxweynaha. Cutubka 15aad Sugidda Nabadda iyo Ammaanka Qaranka. Doorashadii ugu dambeysay ee da ka dhacday Kenya, waxaa ka dhashay rabshado socday 2 bilood, oo ay ku dhinteen in ka badan qof. Waxaa loo dooran karaa jagada Madaweynaha JDS. Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa.
Alberta high school student discovers new diamond extraction method December 28, Fatuma Gedi breaks silence on fake sex tape as suspect arraigned in court December 28, Dastuurka cusub, oo ay taageerayaan Madaxweynaha dalka Mwai Kibaki iyo Raisal Wasaaraha Raila Odinga, ayaa waxaa uu si weyn wax uga badalayaa awoodda madaxweynaha, qaabka loo qeybsanayo kheyraadka waddanka, waxaa uuna abuurayaa aqal cusub oo senate-ka iyo dowladdo hoose oo awoodooda la xoojiyey.
Qodobka aad-Muddada Xaafiiska Madaxweynaha iyo Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano. Maqaamkma Magaalo madaxdu ay ku leedahay qaabdhismeedka federaalka ee Jamhuuriyadda wuxuu ku xusan yahay Cutubka 7-aad ee Dastuurka.
Hareeraha waxaa ka haya laba shabeel oo isu tusmaysan, kuna kala taagan labo waran oo isku weydaarsan caaradda hoose ee gaashaanka, ayna weheliyaan laba caleen-cawbaar, diillin cadna ay ku qoofalan tahay.